MARXALADAHA HORUMARKA EEYAHA, CAAWINTA IYO KORINTA EY YARYAR - EEYAHA
Marxaladaha horumarka eeyaha, caawinta iyo korinta Ey yaryar
Dhalashada illaa 3 toddobaad
20-ka maalmood ee ugu horreeya nolosha cunuggu awood uma laha barasho badan. Awoodda maskaxdu waxay ku saabsan tahay nil. Ardaygu wuu ficil celin doonaa markuu baahi u qabo cunto, hurdo, diirimaad iyo hooyadeed. Inta lagu jiro 3da asbuuc ee ugu horeeya aad ayey muhiim u tahay in la ilaaliyo biyo xireenka sidoo kale. Iyadu markooda way ilaalin doontaa eeyaha. Hal mar ama laba jeer eeydu waa in uu wax ka qabtaa qof bini aadam ah waana in la miisaamaa maalin kasta. Inta lagu jiro 3-da usbuuc ee ugu horeysa biyo xireenka badankood waxay jecelyihiin inay kujiraan aag gooni ah oo diirran, oo aysan kujirin aagagga qoyska. Pups waxay ku qanacsan yihiin sanduuqooda sanqadha 20ka maalmood ee ugu horreeya noloshooda.
3 ilaa 4 toddobaad
Maalintii 21aad waxay u egtahay inay jiraan qashin cusub oo eey ah. Macna ma laha nooc kasta, waa markan marka dareenka hurdada ahi soo tooso. Laga soo bilaabo maalinta 21 ilaa 28 eey yaryar waxay u baahan yihiin hooyadood in ka badan wakhti kasta oo kale maadaama maskaxdooda iyo habdhiskooda dareemayaasha ay bilaabayaan inay horumariyaan oo ay ka warhayaan hareerahooda. Inta hooyadu sanduuqa ka booday, waxay si lama filaan ah u daawadeen iyada oo la yaabban meesha ay aadday. Pups waxaa laga yaabaa inay bilaabaan inay ka soo baxaan sanduuqa xiiqda da 'da, marka waa waqtigii la ballaarin lahaa gurigooda. Marxaladdan waxaan ku darnaa wax yar aagga dheriga oo ku ag yaal sanduuqa whelp . Haddii eey ay hooyadiis ka furto marxaladdan waxay si weyn u saameyn doontaa ladnaanta shucuurtiisa. Kobaca shucuurtu waa ubax uun sida eygu u gartay inuu nool yahay. Sidoo kale waa da'ahan astaamaha lagu kori karo sida xishoodka iyo cabsida. Astaamo kasta oo taban oo ku soo ifbaxa marxaladda nolosha inta badan waa astaamo shakhsiyadeed oo joogto ah.
4 ilaa 7 toddobaad
Laga bilaabo maalinta 29 ilaa 49 eeydu waxay ku dhiiranaan doonaan aagga hurdada ee sanduuqa whelp. Meel fog ma tagayaan, laakiin waxay bilaabi doonaan sahamin. Waqtigan waxaan balaarineynaa aaggooda si aan ugu darno goob ciyaar iyo cunno maalintii. Waqtigaan ayaa la joogaa markii loo rarayo jikada iyo qolka qolka, halkaas oo noloshu ka dhacayso guriga. Tani ma aha da'da lagu joogo qolka jiifka dambe, garaashka ama bakhaarka. Inta lagu jiro wakhtigan, eeygu waxay baran doonaan inay ka jawaabaan codadka, dhawaqa iyo inay aqoonsadaan dad kala duwan. Eeyaha yaryar ee kooxdooda waxay dhisi doonaan 'amar sifeyn ah', qaar waxay rabaan inay hogaamiyaan qaarna waxay rabaan inay raacaan. Kuwii ugu badnaa ayaa wax cuni doona marka hore kuwa omega-na way sugi doonaan. Kuwii xukunka haystay waxay noqon karaan xoogsheeganayaal oo hilibkoobaya dhammaan alaabada ay ku ciyaaraan. Tani waa marxalad muhiim ah oo lagu daawan karo si loo barto dabeecadaha cunug kasta oo ay tahay in loo isticmaalo in la galiyo eeyo yaryar ee guryaha ku habboon. Daraasadaha sayniska qaarkood waxay caddeeyeen in haddii uu jiro xoogsheegasho ku dhex jira qashin kaas oo dadka kale ka dhigaya mid cabsi badan oo xishood badan waxay dejin kartaa astaamo ay aad u adag tahay in laga jeedsado, laakiin sidoo kale waa muhiim in looga tago eeyooyinka koox bulsheed muddo ku filan oo ay noqon karto xiisaha leh iyo eeygu si ay u bartaan qaar ka mid ah xirfadaha tartanka bulshada. Isla qoraalkaas, eey yar yaan loo oggolaan inuu aad u riixo. In kasta oo eyda yar yar ay tahay inay bartaan sida loola macaamilo kooxaha bulshada, eey xoog badan ayaa u baahan inuu barto lama aqbali karo inuu noqdo xoogsheegasho. Noocyo kala duwan ayaa u baahan in lagu kala saaro da 'kala duwan. Badanaa haddii cagajuglaha la korsado marka hore eeyaha yaryar ee haray waxay furi doonaan xoogaa xishoodkooda ah.
Usbuuca 7da, ardayga waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay mid qiiro leh oo diyaar u ah inuu waxbarto, laakiin ardaygu weli ma haysto maskax qaangaar ah. Markay 7 toddobaad jirsato abuurka caruurtu waxay bilaabi karaan tababarka sanduuqa saacad ama laba maalin maalintii oo ay la socdaan 2 arday oo ku jira sanduuqa. Tani waxay ka caawineysaa kala-goynta walwalka. Markay 8 toddobaad jirsato eeygu waa inay awoodaan inay keligood galaan sariirta dhexdeeda si ay u seexdaan, waxayna ku dhowdahay inay u diyaar garowdo gurigeeda cusub.
Ey yar yaan laga qaadin hooyadiis ka hor da'da 7-8 toddobaad. Eyga hooyadu wuxuu ku baraa eeyaha yaryar asluubta qaddarinta, xushmadda, xirfadaha bulshada, iyo aadaabta habboon, oo ay la socdaan casharo kale oo badan oo qiimo leh. Markuu eeygu seego marxaladdan waxay u horseedi kartaa cunugga inuu yeesho arrimo la xiriira dabeecadaha mustaqbalka maadaama bini'aadamka intooda badani aysan fahmin dabeecadda eyga dabiiciga ah oo ku filan oo ay ku bartaan ardayga waxyaalahan.
Staffordshire Maraykan cimri Pit
7 ilaa 12 toddobaad
Laga soo bilaabo maalinta 50 ee ardayga wuxuu u shaqeynayaa karti halkaas oo uu diyaar ugu yahay nolol ka fog qashinkiisa. Waxa eey baranayaan hadda waa la hayaa oo waxay ka mid noqonayaan cidda eygu noqonayo iyo shakhsiyaddiisa. Biyo xireyaasha badankood waxay joojiyaan inay daryeelaan ardaydooda 7 usbuuc, maadaama ay ilko leeyihiin oo ay iska fogeyso. Haddii pup looga tago biyo-xireen inta lagu jiro muddadan horumarka maskaxeed waa la beddeli karaa, maadaama ay weli ku tiirsan tahay iyada. Isla sidaas oo kale ayaa dhici karta haddii dadka qashin qubka la isla dhigo. Waxay isku tiirsan yihiin midba midka kale halkii milkiilaha cusub oo badanaaba kama helaan ammaan ku filan hooyadood ama qashin qubka. Waxay ubaahanyihiin mulkiilahooda cusub inuu lawareego doorka waana muhiim in bini aadamku fahmo dabeecadda eyga dabiiciga ah si loo fuliyo dareenka iyo baahiyaha eyda. Tallaalada ugu horreeya waa in lagu sameeyaa da'da 7.5 illaa 8 toddobaad.
Marka eey eydu la joogto qashinkiisa 8 ilaa 9 usbuuc kadib markuu jiro xiriir bini'aadam oo ku filan uma hagaago nolosha bulshada ee aadanaha. Waqtiga ugu habboon ee la qaadan karo eey cusub waa 8 illaa 9 toddobaad jir. Had iyo jeer way fiican tahay in arday uu ka sameeyo barashadiisa milkiilaha cusub iyo gurigiisa cusub. Eeyadu badanaa waxaa la korsadaa 8, 9, 10 ama 11 toddobaad. Ey-da waaweyn ayaa si fiican u samayn kara haddii soo-saaraha uu waqti badan ku qaatay asaga oo ka fogeynaya qashin-qubka. Fikrad ahaan 9 toddobaad ayaa umuuqda inay yihiin da'da ugufiican noocyada badankood inay aadaan guryaha cusub. Waxa eygu ka barto 8 ilaa 12 toddobaad wuu la jiri doonaa weligiis. Waqtigaan yar eeydu waa in la baro dadka kale oo ay ku lugeeyaan laamiga (wadada) iyagoo iska ilaalinaya wasakhda ama cawska ilaa ay ka helayaan tallaalkiisa 2aad. Haddii talaalada ugu horeeya la sameeyo 8 todobaad iyo tan labaadna la sameeyo 12 usbuuc waa fikrad fiican in la qoro xanaanada cunugga ee bilaabata isla marka ay tahay 12 todobaad.
12 ilaa 16 toddobaad
Ey yar oo da 'ah ayaa ku raaxeysanaya gurigiisa cusub wuxuuna si dabiici ah u dareemayaa baahida loo qabo sameynta xirmo. Waxaa muhiim ah in maanka lagu hayo in eeyaha oo dhami waqtigan ay sameeyeen shakhsiyad guud. Qaarkood waa hogaamiyeyaal dabiici ah oo dhasha, qaarna waa bartamaha wadada waxayna aadi karaan labada dhinacba qaarna aad ayey u hogaansanyihiin runtiina waxay doorbidaan inaysan waxba hogaamin. Dhamaan eeyadu waxay leeyihiin dareen ah inay yeeshaan hogaamiye bixin kara qaab dhismeedka, maxaa yeelay maskaxdooda la'aanteed xirmada ma noolaan karto. Sidaa darteed xitaa eeyga sida dabiiciga ah u dhashay ee adeeca wuxuu dareemi karaa baahida loo qabo in lala wareego alfa haddii ay dareemaan in dadka kale ee ku hareeraysan ay aad u itaal daran yihiin si ay u daryeelaan xirmada. Eeyadan ayaa inta badan aad looga nuuxnuuxsadaa doorkooda maxaa yeelay iyagu dhab ahaan ma doonayaan, laakiin waxay dareemayaan baahida loo qabo inay hogaamiyaan isla sidii oo kale. Si kastaba ha noqotee, iyagii waa arrin nolol ama geeri ah.
Mid ka mid ah su'aalaha ugu waaweyn ee milkiileyaasha cusubi ka wacaan ayaa ah in cunuggu yahay malaa'ig toddobaadyadii u horreeyay ee asbuucyo ah ka dibna wuxuu billaabayaa inuu isku dayo inuu xakameeyo waxyaabaha ku xeeran. Tani waxay dhacdaa marka eeygu u arkin bini-aadamka inay yihiin hoggaamiyeyaal dabiici ah oo u dhashay oo ay ixtiraami karaan oo ay isku dayaan inay xirmada u kala horreeyaan. Haddii tani dhacdo macnaheedu maahan inaad heshay eey xun, laakiin badiyaa waxay ka dhigan tahay inaadan ahayn milkiile wanaagsan oo milkiile. Milkiilayaashu waa inay ahaadaan kuwo deggan laakiin adag oo dabagal ku sameeya. Deji xeerarka guriga oo ku dheji iyaga. Bar addeecid aasaasi ah iyo sida cirib loogu xidho xadhig. Ha u ogolaan eeyaha bool albaabka ka baxa Isdeji oo kalsooni qabo oo xusuusnow in eeyadu dareemi karaan shucuurtaada. Haddii aad dhibaatooyin xagga shucuurta ah qabtid eygaagu wuu ogyahay oo wuxuu kuu arki doonaa inaad tahay qof daciif ah. Xusuusnow markasta xanaaqa eeyga waa daciifnimo, markaa neef qoto dheer naftaada xakamee.
Haddii eeygu dareemaan inay ka maskax adag yihiin bini'aadamka ma rabto inay noqoto xagga hoose. Milkiilayaasha eeydu waa inay u diyaar garoobaan in ardaygu isku dayo inuu isagu sameeyo midka ugu badan qoyska . Halkani waa meesha aad u baahan tahay inaad ku fahamto dabeecadaha dabiiciga ah ee eyga oo aad barato luuqadooda si aad u aqriso. Waxay arki kartaa inay jir ahaan u garaaci karto milkiilahiisa (sida dhalinyarada qaarkood) oo ay nuuxsan karto ama ciyi karto. Haddii ay taasi dhacdo waa in loo diyaar garoobaa in si dhaqso leh loo joojiyo. Waa nooc ka mid ah sida carruurta doonaya macmacaanka ka hor cashada ama inay hadhoow soo socdaan. Kaliya waa inaad tiraahdaa MAYA. Ey kasta wuu ka duwan yahay, sida carruurtu u yihiin, sidaa darteed waxaad u baahan tahay inaad ogaatid waxa adiga kuu habboon iyo xaaladdaada. Haddii ay tahay mid dagaal badan hab ka mid ah waa inaad dhabarka ku dhajiso oo aad ku haysato iyada oo leh MAYA adag. Haddii arday loo oggolaado inuu ka baxsado dhaqan xumo wuxuu lumin doonaa ixtiraamka milkiilaha oo wuxuu bartaa in caasinimadu ay isaga ku hesho qaabkiisa. Furaha ayaa ah in bini aadamku isdajiyo, kalsooni qabo oo iswada adkeysto isla waqtigaas. Haddii aad isku aragto inaad qaylinayso ama aad xanaaqsan tahay maadaama bini-aadamku ka baxsan yahay xakamaynta oo aad u baahan tahay inaad barato sida loo sawiro naftaada sida qof eeygaaga u eegi karo oo ixtiraami karo. Eeyadu ma dhagaystaan ​​aadanaha aan xasilloonayn iyo wax kale laakiin deggan, kalsooni iyo adkaysi leh, iyaga ayaaba deggan. Waa inaan dulqaad loo helin dulmiga. Waxyaabo badan oo jacayl iyo faham ah ma joojin doonaan dhaqanka xun. Pup waa in si dhakhso leh oo adag loo muujiyaa inaad adigu tahay masuulka.
american eskimo shih tzu mix
Hadday sii socoto waca wac breed iyo / ama dhaqan dhaqameedka eyga oo fahmaya dabeecadda eyga dabiiciga ah caawimaad. Haddii aad haysato abuure wanaagsan oo fahmaya eeyga xitaa dib u soo celinta isaga dhowr maalmood ayaa kaa caawin kara sida loo yaqaan 'breed' ay eygu dib ugu soo celinayo xakameyntiisa waxaadna qiimeyneysaa dhaqankaaga iyo fahamkaaga xayawaankan aad isku dayeyso inaad la noolaato. U dirida eeyga si aad u tababbarto adigoon naftaada u tababbarin waligaa ma shaqeyso, maadaama sida eygaagu u dhaqmayo inta badan uu xiriir la leeyahay aadanaha uu la nool yahay. Waad u diri kartaa eeygaaga si loo tababaro, laakiin haddii eeygu u soo noqdo bini aadam aan weli fahmin baahidiisa, u dhaqmo sida raacsan oo daciif ah iyo / ama uu yahay tareen shucuur leh oo ku dhex burburay eeyga ayaa ku laaban doona dariiqyadiisii ​​hore. Tani waxay u socotaa eey kasta oo da 'kasta leh.
Baro sida loo qurxiyo eeygaaga. Bar inay jiifsato wali hagaajinta iyo jarista cidiyaha. Haddii aad dhibaato ku qabtid wac soo-saaraha ama dhaqan-yaqaan si aad caawimaad u hesho. Waxaa ugufiican inaad kasbato ixtiraamka eyga iyo kalsoonida la xiriirta qurxinta marka ay gaaraan 16 toddobaad.
Cunsur dabiici ah oo pups ah ayaa noqon doona inay xilliyo iskudayaan inay tijaabiyaan amarka xirmada. Gaar ahaan haddii ay jiraan carruur. Haddii milkiiluhu yahay mid adeeca, aamusnaan ah oo toddobaadle ah, sidaasna eeyga u dareensiiya baahida loo qabo inuu hoggaamiyo guriga, ixtiraamka uu u hayo milkiilaha ayaa wiiqmi doona milkiiluhuna wuxuu ka liidan doonaa indhaha eeyaha. Xaaladahan oo kale milkiilaha waxaa loogu talo galay inuu lahaado eeyga oo waxaad xaqiiqdii arki doontaa dhibaatooyin xagga dhaqanka ah oo soo ifbaxay.
Ey yar waa inuu ku bilaabo bilowga tababarka sanduuqa markii uu ka baxo guriga nalka. Ka caawi cunuggaaga yar yar sidii uu u dareemi lahaa ammaan isagoo siinaya sariirtiisa iyo sariirteeda oo ah meel uu keligiis keli ku ahaan karo markii uu u baahdo wakhti deggan. Waa in la daadiyo hal ama labo hurdo maalintii, gaar ahaan marka la sameynayo iyo marka la cunayo cashada oo la shiido habeenkii. Waa inaanu waligiis haysan guriga socodkiisa ilaa 6 bilood kadib markuu jiro ama jabinta guriga iyo tababbarku waxay noqon karaan kuwo aad u adag. Eygu waa inuu bilaabaa addeecid rasmi ah markay tahay 6 bilood, sida ugu dhakhsaha badan.
Xusuusnow markii aad dooratid inaad korsato eey waxaad dooranaysaa inaad xayawaan geysato gurigaaga. Xayawaanku maahan ilmo dad ah oo aadanuhuna kuma dhasho dareen dabiici ah. Waqti sii qaado si aad wax uga barato kaneecada una diyaar garow inaad bedesho hab nololeedkaaga si aad ula qabsatid xubinta cusub ee qoyska.
eeyo waaweyn oo cad cad Pyrenees weyn
Waxaa iska leh MistyTrails Havanese
shih tzu qas yorkie
eyda eey afaf barbaraha madow
sawirada eeyo yar yar oo buur bernese ah
bulmastiff iyo rottweiler isku dhafka eey
isku darka shaybaarka pitbull oo buuxa